मैले छोरा काटे भनेर आई, कल्पना समेत गरेका थेनौ, आफ्नै दिदिले रुदै सुनाईन घटनाको बारेमा ! (भिडियो)
मैले छोरा काटे भनेर आई, कल्पना समेत गरका थेनौ, आफ्नै दिदिले रुदै सुनाईन घटनाको बारेमा ! (भिडियो) देवता समान आमा कति क्रुर बन्न सक्छिन् भन्ने उदाहरण बनेकी छन्, भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिकाको बासीखोरा घर भई भोजपुर नगरपालिका वडा नं ९ पानीट्याङकी बस्ने सूर्य थापाकी २५ वर्षीया श्रीमती सम्झना थापा । उनले.....
रंगशालाको बार डोजर लगाएर भत्काएपछी धुर्मुस रुदै मिडियामा ! (भिडियो हेर्नुहोस)
चितवनमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणस्थलमा लगाइएको बार केही स्थानीयले भत्काइदिएका छन् । बुधबार विहान डोजरसहित आएका केही व्यक्तिले जस्तापाताले लगाएको बार भत्काइदिएका हुन् । बार भत्काउने क्रममा उनीहरुले धुर्मस–सुन्तली फाउण्डेशनका कर्मचारीहरुलाई धम्कीसमेत दिएका थिए । रंगशाला.....
दाईजो नल्याएको भन्दै श्रीमानले नै गरे कुटपिट, बच्चा पनि खेर गयो, यसरी पोखिन् पीडा !
दाईजो नल्याएको भन्दै श्रीमानले नै गरे कुटपिट, बच्चा पनि खेर गयो, यसरी पोखिन् पीडा ! दाईजोमा फर्निचर सामान र मोटरसाईकल नदिएको भन्दै सर्लाहीमा एक युवती आफ्नै श्रीमानको कुटपिटबाट घाईते भएकी छिन् । एक लाख रुपैयाँ दाईजो दिएर २०७५ फागुन २९ गते विवाह बन्धनमा बाधिएकी १८ वर्षिया बिनितादेवी यादव श्रीमानको कुटाईबाट.....
धामीको लहलहैमा बालकको बलि चढाउने, ३ आरोपी पक्राउ, धामी फरार !
अढाई वर्षीय बालक आर्यन साहको हत्या आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ। तीन सातादेखि अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार हत्या ‘बलि’ का लागि भएको हुन सक्ने तथ्य भेटिएको छ। धनुषाको मिथिला नगरपालिका–६ ढल्केवरका शम्भु साहका छोरा आर्यनको शव वैशाख २४ को बिहान घरनजिकैको बाँसघारीमा भेटिएको.....
श्रीमान् नभएको मौकाछोपी जबरजस्ती करणी गरेको भिडियो खिचेर ब्याकमेल गर्ने पक्राउ !
बिहे भएको केही दिनमै आफ्नै भिनाजुले जवरजस्ती सम्बन्ध राखि, भिडियो खिचेर ब्ल्याकमेल गरेपछी ! विवाह गरेर आएको केही समय मात्रै भएको थियो, नाताले भिनाजु पर्ने सई रामविनोद यादवले श्रीमान् नभएको मौकाछोपी मलाई जबरजस्ती गर्यो । एक पटकको दुव्र्यवहार मैले आँसु पिएर सहेकै थिएँ ।फेरि पनि यौन सम्बन्धका लागि बोलायो.....
उखुबारीमा भेटियो शव, पहिचान हुन सकेन !
उखुबारीमा भेटियो शव, पहिचान हुन सकेन ! रौतहटको गौर नगरपालिकामा एक पुरुषको शव फेला परेको छ । गौर चन्द्रनिगाहपुर सडक खण्डको गौर ७ सिसवाको उखुबारीमा शव फेला परेको हो । उखुबारीमा घाँस लिन गएका स्थानीयले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । मृतक व्यक्तिको पहिचान हुन नसकेको तथा शवलाई पोष्टमार्टमाका लागि जिल्ला.....
Breaking: आफ्नै भिनाजुले गरे ढुङ्गाले थिचेर निर्मम हत्या, प्रत्यक्षदर्शीले यसरी सुनाए ! (भिडियो)
आफ्नै भिनाजुले गरे ढुङ्गाले थिचेर निर्मम हत्या ! (भिडियो) माछापुछ्रे गाउँपालिका वडा नं. ७ धम्पुसमा मनकाजी बि.क को हत्या भएको छ । हत्या अभियोगमा उनकै भिनाजु सन्त बि.क लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । रक्सी पिएर सन्तले मनकाजीलाई ढुङ्गाले थिचेर बाटोमै हत्या गरेको स्थानिय र आफन्तले बताएका छन । ढुङ्गाले थिच्दै गरेको.....
वीरगञ्जमा माटोले ढिस्कोले पुरिएर २ जनाको मृत्यु भएको छ । बीरगञ्जको बाइपास रोडमा घरको जग खन्ने क्रममा माटोको ढिस्कोले पुरिएर बिश्रामपुर गाउँपालिका इटियाही बस्ने ५० वर्षका दशरथ पण्डित र बाराकै परवानिपुर गाउँपालिका–४ बस्ने ५० बर्षका जवाहिर रामको मृत्यु भएको हो । जग खन्दै गर्दा खसेको ढिस्कोमा तीन जना.....
ब्वाइफ्रेन्डले iPhone नकिन्दे पछि, सबैको अगाडि हानिन ५२ झापड, देख्ने जति चकित परे ! (भिडियो हेर्नुस्)
प्रेमिकाले सायद प्रेमीले भ्यालेन्टाइन्स डेमा नयाँ आइफोन उपहारमा देलान् र सानका साथ चलाउँछु भन्ने सपना देखेकी थिइन् । आफूले सोचेको जस्तो नभएपछि प्रेमिका रिसले आँखा नदेख्ने भइन् र सार्वजनिक स्थानमा नै प्रेमीलाई ५२ पटक चड्कन लगाइन् । सुन्दा अचम्म लाग्ला तर घटना साँचो हो । एक चीनियाँ प्रेमीले प्रेमिकालाई.....
सबैलाई चकित बनाउने: “महिलाहरूले” गरेका अहिले सम्मकै खतरनाक “चाेरिहरू” (हेर्नुहाेस भिडियाे)
"महिलाहरूले" गरेका अहिले सम्मकै खतरनाक "चाेरिहरू" (हेर्नुहाेस भिडियाे) आजभोलि समाजमा बिकृती, बिसङती एकदमै बढ्दै गएको छ । हत्या, हिंसा, बलात्कार, चोरी डकैतीले जरो गाड्न थालेको छ । बढ्दो बिकास क्रम संगै यस्तो बिकृतीहरु झनै बढेको छ । यस्ता कार्यमा अहिले केटाकेटीको उस्तै सहभागीता देखिन्छ । यो भिडियोमा समेटिएका.....